Gbasara Anyị - Protech International Group Co., Ltd.
Mee ka njikọ nke ụlọ ọrụ ahụ dịkwuo mma ma wuo ụlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ. Nchịkọta ekele, ịja mma maka Afọ, na Cheedị banyere Ọdịnihu!
Protech International Group Co., Ltd. Okwuchi na-ewe smart ngwaike ngwaahịa dị ka isi, tinyere smart ime ụlọ na n'èzí gburugburu ebe obibi Monitors, smart ngwá na mita, na ígwé ojii njikọ nyiwe, nke na-karị na-eji na electronic na eletriki ule, ime ụlọ na n'èzí n'ụlọ gburugburu ebe obibi nlekota oru, ike ịrịba ama nlekota oru na ndị ọzọ ubi. Bụ ngụkọta ihe ngwọta. A na-ebupụ ngwaahịa ndị a karịa mba 100 na mpaghara dịka Europe, America na Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia. Ndị isi mba ụwa bụ Leroy Merlin, Foucault na ụdị mba ndị ọzọ, na China na-akwado Xiaomi, Huawei na nyiwe ndị ọzọ.
Protech International Group Co., Ltd nwere ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ, na-ekpuchi mpaghara nke mita 1,500. Ọ dị na Nanshan District, Shenzhen, Guangdong Province, na isi mpaghara Shenzhen. Ọ nwere ike ijikọ ndị ahịa ụlọ na ndị mba ọzọ na obere ụzọ. Ọ na-ewe ndị ahịa oge 40 iji rute adreesị ụlọ ọrụ site na ọdụ ụgbọ elu.
7 ndị mmadụ
3 ndị mmadụ
43 ndị mmadụ
Protech International Group Co., Ltd na-ewe ngwaahịa ngwaike ngwaike dị ka isi, gụnyere nlezianya ime ụlọ na mpụga gburugburu, smart smart na mita, yana nyiwe njikọ igwe ojii, nke a na-eji na elektrọnik na eletriki elele, nyocha ime ụlọ na n'èzí. nlekọta ahụike na mpaghara ndị ọzọ. Bụ ngụkọta ihe ngwọta. A na-ebupụ ngwaahịa ndị a karịa mba 100 na mpaghara dịka Europe, America na Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia. Ndị isi mba ụwa bụ Leroy Merlin, Foucault na ụdị mba ndị ọzọ, na China na-akwado Xiaomi, Huawei na nyiwe ndị ọzọ.